အဆီလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတဲ့ အသီးတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ - YOYARLAY Digital Media and News
ဝိတ်ကျအောင် အသီးစားပြီး ဝိတ်ချချင်သူလေးတွေရှိလား။ ဒါဆိုရင်တော့ အသီးလည်းစားရင်း အဆီလည်းကျရင်းဖြစ်စေဖို့အတွက် ဒီအသီးလေးတွေကို စားပေးရင်အဆင်ပြေနိုင်မှာပါ။ ဒီတော့ ဝိတ်ကျစေဖို့ စားပေးသင့်တဲ့ အသီးလေးတွေအကြောင်း ပြောပြပေးမယ်နော်။
အသီးစားရင်း ဝိတ်ချတာက ကောင်းလား….
အသီးအရွက်တွေစားပြီး ဝိတ်ချတာက ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေနိုင်သလို အသားအရေကို ကြည်လင်စေတဲ့ အာနိသင်ကိုပါ ပေးစွမ်းပါတယ်။ ဒီတော့ အာဟာရလည်းရ၊ အသားလည်း ကြည်၊ ဝိတ်လည်းကျစေဖို့ အစာအိမ်ပြဿနာမရှိဘူးဆိုရင် အသီးစားပြီး ဝိတ်ချတာက တော်တော်လေး အဆင်ပြေမှာပါ။
အသီးတိုင်းက အဆီလောင်ကျွမ်းစေနိုင်လားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အသီးအချို့ပဲ အဆီကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး ဝိတ်ကျစေဖို့ အားဖြည့်ပေးတာပါ။
ဝိတ်ကျစေမယ့် အသီးအချို့ ကဘာတွေလဲ…..
ဒီအသီးတွေစားပေးတာက ဝိတ်ကျဖို့ တော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပေးပါတယ်။
ထောပတ်သီးမှာ အစားစားချင်စိတ်ကို အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အကျိုးပြုအဆီတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Omega-9 fatty acids ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီအဆီဓာတ်က ကိုယ်တွင်းဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို အကောင်းဆုံးလည်ပတ်စေနိုင်ပါတယ်။ Omega-9 fatty acids က သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေနိုင်ပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထူးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးရဲ့ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတာပါ။ ထောပတ်သီးရဲ့ အမျှင်ဓာတ်က အဆာခံနိုင်စေသလို အစာခြေစနစ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်ပြီး သွေးတွင်းအဆီပမာဏကို အကောင်ဆုံးထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တွင်းအဆီတွေကို အကောင်းဆုံး လောင်ကျွမ်းစေဖို့လည်း အားဖြည့်ပေးပါတယ်။
အဆီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်တဲ့ အင်ဇိုင်းတစ်မျိုးပါဝင်နေတဲ့အသီးပါ။ ကိုယ်တွင်း အကျိုးပြုအဆီပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပြီး အဆီပိုတွေကိူ အကောင်းဆုံးလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ အင်ဆူလင်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပြီး သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကြောင့်အဆီစုပုံမှုမဖြစ်အောင် တားဆီးပေးပါတယ်။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝပြီး ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းတာပါ။ အဝလွန်တာနဲ့ နှလုံးရောဂါပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ စားပေးသင့်ပါတယ်။ အရသာရှိရှိ Grapefruit (ဂရိတ်ဖရုစ်) ဖျော်ရည်လေးသောက်ရင်း ဝိတ်ချပါ။
သလဲသီးမှာပါတဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်အာနိသင်က အဆီတွေကို သိသိသာသာလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ သလဲသီးစားသုံးပေးမှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ လောင်ကျွမ်းတဲ့ကယ်လ်လိုရီပမာဏက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကြောင့် လောင်ကျွမ်းတဲ့ကယ်လ်လိုရီပမာဏနဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ဆီးချိုရှိသူတွေအတွက် သင့်တော်သလို သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို သိသိသာသာလျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသလို ဗီတာမင် C လည်းကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် အဆာခံနိုင်သလို ကိုယ်တွင်းကအဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပြီး အဆိပ်အတောက်တွေကိုပါ အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း အကောင်းဆုံးထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး ဆဲလ်တွေက အဆီတွေစုပ်ယူနိုင်မှုကိုလည်း ကန့်သတ်ပေးပါတယ်။
ပန်းသီးကလည်း လိမ္မော်သီးလိုပါပဲ။ ကယ်လ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းပြီး အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝတာကြောင့် အဆာခံနိုင်သလို ကိုယ်တွင်းကအဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပြီး အဆိပ်အတောက်တွေကိုပါ အထိရောက်ဆုံးဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း အကောင်းဆုံးထိန်းညှိပေးနိုင်ပြီး ဆဲလ်တွေက အဆီတွေစုပ်ယူနိုင်မှုကိုလည်း ကန့်သတ်ပေးပါတယ်။ ဝိတ်ချနေသူတွေအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမယ့် အဆာပြေစားစရာတစ်ခုပါ။ အခွံကလည်း ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တာကြောင့် အခွံမနွှာဘဲစားပေးပါ။ ရေစင်အောင်ဆေးဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့။
အရသာရှိပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိလှတဲ့ အရောင်အသွေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဘလူးဘယ်ရီသီးလေးက သကြားပါဝင်မှုနည်းပြီ စားလိုက်တဲ့အခါ စိတ်ကျေနပ်မှုရစေပြီး အဆာခံနိုင်စေမှာတော့ အသေအချာပါ။ သကြားဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းတာက စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အရသာ သိပ်မရှိသလို ခံစားရစေနိုင်ပေမယ့် အချိန်အကြာကြီး စိတ်ကျေနပ်မှုရနေစေမှာပါ။ ဗိုက်အဆီတွေကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးနိုင်မှာပါ။ သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သလို သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ သွေးတွင်းအဆီတွေကို ကျစေတာက ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေနိုင်တဲ့ အဓိကအချက်တစ်ရပ်ပါ။
Previous Previous post: စိတ်ခံစားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆာလောင်မှု(Emotional Hunger) ကိုဖယ်ရှားကြပါစို့
Next Next post: ခြေထောက်နာကျင် တတ်သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေ
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ဦးဆရာတွေကဘယ်သူများလဲ…. လက်ဦးဆရာ မည်ထိုက်စွာ ပုဗ္ဗာစရိယ မိနဲ့ဖ ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကလေးတစ်ယောက်အတွက် လက်ဦးဆရာတွေက မိဘနှစ်ပါးပါ။ လက်ဦးဆရာဆိုတာက အမည်နာမနဲ့ညီအောင် လက်ဦးဆရာပီသဖို့လည်း လိုပါမယ်။ ဒီလိုလက်ဦးဆရာပီသအောင်လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာကြီးပြင်းစေဖို့ လိုသလို သူတို့လေးတွေရဲ့ ပြင်းပြနေတဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကို…
Published: February 11, 20201:14 pm Updated: 1:16 pm